LA OGAADAY: Xasan Sheekh Oo Qorshe yaab leh Laga Fashiliyay+Xaalka Oo.. – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
Warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay Shabakada Wararka ee Baardheere24.com ayaa sheegaya in la fashiliyay isku day la doonayay in loogu shubto codadka xiliga tartanka madaxweynaha.
Arintan ayaa la fahansan yahay inuu watay madaxweynaha haatan Xasan Sheekh Maxamuud oo taageero ka helaya gudiga doorashada qaranka iyo xubno dowlada ah.
Xogta la helay ayaa muujineysa in maalinta doorashada madaxweynaha ay dhaceyso la diyaariyay santuuqyo been abuur ah kuwaas oo la doonayay in la dhigo meel aan ka dheereyn hoolka ay xaflada doorashada ka dhaceyso.
QAABKA LOO FASHILIYAY
Musharaxiinta qaar ayaa kasoo horjeestay in ciidamada DF Soomaaliya kaliya lagu aamino amaanka xarunta doorashada.
Madaxweynaha Puntland ayaana ogolaaday in ku dhawaad 250 askari oo Puntland ka socda lagu kaabo ciidamada sugaya doorashada Muqdisho amaankeeda, sidoo kale waxaa ciidamadaas la socon doona gudi ka qeyb qaadan doona farsamada doorashada.
Sido kale wakiilo beesha caalamka ah ayaa marqaati ka noqon doona hoolka ay ka dhaceyso doorashada ka hor inta aysan bilaabin.
Ra’isul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdi Rashiid ayaa dhankiisa la ogaaday inuu u ololeynayo in barlamaanka cusub ay go’aan ka gaaraan qaabka doorashada halkii markii hore go’aanada ay gaari lahayeen gudiga doorashada.
SIDEE LOO QORSHEEYAY KU SHUBASHADA
Xubnaha Damujadiid ugu sareeya ayaa la aamisan yahay iney doonayeen ku shubashadan in loo maro hab laga sii shaqeeyay.
Tusaale, waxaa loo diiday saxaafada iney tabiso doorashada madaxweynaha iyo tan gudoonka barlamaanka.
Kaliya TV-ga qaranka iyo Radio Kulmiye oo aan tabin karin war ka baxsan kuwa uu tabinayo Tv-ga qaranka ayaa loo ogolaaday iney doorashada tabiyaan.
Sidoo kale, madaxweynaha DF Soomaaliya ayaa ku adkeysanayay in gudiga doorashada ay sii wataan shaqadooda ilaa doorashada madaxweynaha.
Previous: Suspect arrested in killing of ICRC worker in Somalia
Next: FALANQEYN: Rajo beel ka muuqda wada shaqeynta Aqalada Sare iyo Hoose